टिक-टक बनाउने भन्दै सेती नदीमा पसिन ? संगै गएका साथीले खोले सबै कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) – Ap Nepal
टिक-टक बनाउने भन्दै सेती नदीमा पसिन ? संगै गएका साथीले खोले सबै कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
काठमाडौँ । तनहुँको शुक्लागण्डक नगरपालिकामा पर्ने रक गार्डेनमा रहेको सेती नदीमा टिकटक बनाउन खोज्दा ५ दिन अगाडि मात्रै हरि सिक्देलसंग बिहे गरेकी पवित्रा लम्सालको मृत्यु भएको छ ।
आफ्ना दुईजना साथीहरूसँग टिकटक बनाउन भनेर सेतीको रक गार्डेन भन्ने ठाउँमा जब टिकटक बनाउन लागिन् तब उनलाई सेती खोलाले बगाएर लगेको हो। ५ दिन अघिमात्र बिहे गरेकी उनी दुलान फर्काउन भनेर घर आएकी थिइन् र टिकटक भिडियो बनाउन खोला जाँदा उनको त्यहीँ मृत्यु भएको छ ।
घट नास्थलमा चौतारास्थित प्रहरी चौकिका प्रहरी प्रमुख र शुक्लागण्डक नगरपालिकाका मेयर सहितको टोली पुगेर घटनास्थलको बारेमा जानकारी लिएका छन्। ससुरा केदारनाथ सिग्देलका अनुसार पवित्रा र हरिको विवाह हिन्दुसंस्कार अनुसार नै एक अर्कामा मन पराएर दुवैको मञ्जुरीमा गरिएको थियो।
बुहारीले बिबाह पछि पनि पढ्ने इच्छा गरेको भएकाले घरपटिले पढाइदिने समेत बाचा गरेका थिए।उनी आफ्ना साथीहरू सहित फोटो खिच्नका लागि भनेर सेती नदीको रक गार्डेनमा पुगेकि थिइन्। उनेले आफ्ना साथीहरूलाई भनिन्,मसँग फोटो खिच्ने भए आउनु भोलि त म फेरि घर गइहाल्छु,।
खिच्न पनि पाउँदैनौ भनेकी थिइन् नभन्दै भोलि त हैन त्यसै दिन छोडेर हिँडिन्। यो कुरा गरेको उनका आफ्ना देवरले बताएका छन्। पवित्राका ससुरा एक शिक्षक हुन् भने श्रीमान हरि विदेशमा काम गर्दै आउनुभएको छ। उनी बिहे गर्न भनी गत श्रावण ३१ गते नेपाल आएका थिए र भर्खरै आजभन्दा पाँच दिन अघि उनले विवाह गरेर दुलान फर्काउन गएका थिए।
पवित्रा मात्र १९ वर्षकी थिइन् र अका लमा उनले ज्या न गुमाउनु परेको छ । घटना हुँदा पवित्रासंग अरु २ जना साथीपनि थिए ।पवित्रा स्कुलमा आफ्नो रिजल्ट लिन आएकी थिइन् र साथीहरुसंग निकै समयपछि भेट भएको हुँदा उनीहरू टिकटक बनाउन भनी रक गार्डेन आएको पवित्राका साथीले बताए ।
साथीहरूको अनुसार पवित्रालाई भेट्न भनी उनको देवर आएको र देवरलाई भेटेपछि उनीहरु फेरि रक गार्डेनमा गएर फोटो खिच्न गएका थिए । त्यसपछि पवित्रा खोला नजिक गएको र पवित्रा आफै हा ‘म्फा’लेको हो या खोलाले ब गाएको हो उनीहरुलाई थाहा नभएको बताए ।
Nextनेपालमा इन्टरनेटको शुल्क बढाउने ‘आईस्पान’ काे निर्णय ..कति बढ्दै छ त?
मोडल अञ्जली अधिकारीलाई के भयो यस्तो ? लिएर आइन् यस्तो भिʼडियो (हेर्नुहोस् अभि’नित भिडियो)
खाने तेलको मूल्य लिटरमै सय रुपैयाँले बढ्यो हेर्नुहोस्..
भिषण वर्षाले मच्चायो वि, तण्डा हेर्दा-हेर्दै ढल्यो घर , २७ जनाको मृ, त्यु (भिडियो हेर्नुस्)
यसरि गरियो भागरथीको शवको अन्तिम संस्कार (भिडियो सहित)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (118638)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (40629)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (36829)